17 jirada Soomaaliya oo helay Saddexda dhibic kulankii ay la ciyaareen Itoobiya. - Somali Cable
Home/Sports/17 jirada Soomaaliya oo helay Saddexda dhibic kulankii ay la ciyaareen Itoobiya.
17 jirada Soomaaliya oo helay Saddexda dhibic kulankii ay la ciyaareen Itoobiya.
Abdirisak Omar 3 days ago
Barcelona oo ku jirta mid kamid ah waayihii ugu fiicnaa ee daafaca.
Mourinho oo Taleefanka kula hadlay daafac muhiim u ah Barcelona.
Kooxaha Manchester oo wada doonaya saxiixa Neymar.
Zlayan Ibrahimovic oo ku biiray koox ka dhisan MLS-ka.